မျက်မှန်တပ်တဲ့သူတွေသာ နားလည်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ (၁၂)ခု - Lifestyle Myanmar
မျက်မှန်တပ်ရခြင်းက ရိုးရှင်းပေမယ့် တကယ်တော့ လွယ်ကူတဲ့အရာတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ မျက်မှန်တပ်တိုင်း ကြုံရတဲ့ ဒုက္ခကို မျက်မှန်တပ်ရသူတွေကလွဲပြီး နားလည်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် နေ့စဉ်အခြေခံအားဖြင့် မျက်မှန်တပ်ဆင်သူတွေ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခြေအနေလေးတွေကို share ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
၁။ တီဗွီကြည့်နေရင်း ကော်ဖီ/လက်ဖက်ရည်ပူပူသောက်တာဟာ မဖြစ်နိုင်တဲ့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်
၂။ ဘေးတစ်စောင်းလဲလျောင်းနေရင်း တီဗွီကြည့်တာက ကောင်းပါတယ်၊ တကယ်တော့ ဒါက မျက်မှန်တပ်ထားတဲ့သူတွေအတွက် မဟုတ်ပါဘူး။
၃။ မိုးရွာတဲ့ရှုခင်းက လှပါတယ်၊ သို့သော် မင်းမြင်ရရင်….
၄။ သင့်ရဲ့မှန်ဘီလူးတွေအတွက် မှန်ကန်တဲ့ magnification ကို ရွေးချယ်ခြင်းက မလွယ်ပါဘူး
၅။ မျက်မှန်နဲ့ နမ်းခြင်းက ရိုမန့်တစ်ဆန်သင့်သလောက် မဆန်ပါဘူး
၆။ မျက်မှန်မပါဘဲ မိတ်ကပ်လိမ်းရတဲ့ ဒုက္ခကို မျက်မှန်ဝတ်တဲ့ကောင်မလေးတွေသာ နားလည်နိုင်ပါတယ်
၇။ လေးလုံးလို့ အခေါ်ခံရသလား? ကောင်းပါပြီ …တစ်ခါတစ်ရံ ၆လုံး လိုပါတယ်။
၈။ မျက်မှန်မပါတဲ့အချိန် သူငယ်ချင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါ
၉။ တစ်ခါတစ်ရံ သင့်အဝတ်အစားတွေက သင့်မျက်မှန်ကို ယခင်ကထက ပိုညစ်ပတ်စေနိုင်ပါတယ်
၁၀။ ဘယ်သူမှ မကြားချင်တဲ့အသံ
၁၁။ ကံဆိုတာ နှစ်ဖက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
၁၂။ သူငယ်ချင်းအချို့က သင်ဖြတ်လျှောက်သွားစဉ် သူတို့ကို မနှုတ်ဆက်မိတာကြောင့် စိတ်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်
တစ်ခါတလေမှာ (တစ်ချို့ဆို အမြဲတမ်းလိုလို) ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပန်းတိုင်လေးတစ်ခု၊ စိန်ခေါ်မှုလေးတစ်ခုကိုတောင် အောင်မြင်အောင် မလုပ်နိုင်ဘဲ ကျရှုံးသွားတဲ့အချိန်တွေရှိကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ငါက အောင်မြင်ဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး၊ မဟုတ်ရင်လည်း နောက်လမှပဲ အောင်မြင်အောင်လုပ်တော့မယ်၊ ဒါဆိုလည်း နောက်နှစ်မှပေါ့လို့ ဒီအတိုင်းပဲ ဖြေသိမ့်လိုက်ကြတယ်။...
၁။ သင်ကိုယ်သင် မကြာခဏခွင့်လွှတ်ပါ ခွင့်လွှတ်ခြင်းက သင့်ဘဝမှာ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့အကောင်းဆုံးနှင့် အခက်အခဲဆုံးအရာဖြစ်ပေမယ့် ၎င်းက တကယ်အစွန်းထက်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မကြာခဏဝေဖန်တတ်ကြပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ခွင့်လွှတ်ဖို့ကျတော့ ခက်ခဲနေတတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေနှင့် မိသားစုတွေကို ကျွန်မတို့က အလွယ်တကူ ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့...
ဆင်းရဲတဲ့ မိသားစုမှာ ကြီးပြင်းလာကြောင်း ဖော်ပြနေတဲ့ အလေ့အကျင့် (၁၀)ခု
လူတိုင်းက ကလေးဘဝထဲက ငွေဇွန်းကိုက်ပြီး မွေးဖွားလာကြသူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ထဲက တစ်ချို့က မိသားစုပြဿနာတွေ၊ တစ်ချို့က ရွယ်တူချင်းပြဿနာတွေ၊ (သို့) ငွေရေးကြေးရေးပြဿနာတွေ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ မိဘတွေရဲ့ ငွေရေးကြေးရေးအခက်အခဲတွေက ခဏသာဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် အဲ့ဒီအချိန်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်က ထာဝရတည်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ၁။ အစားအစာနဲ့...